मुख्यसडक नै बन्द गरेर कीर्तिपुरमा चुनावी आमसभा, सर्वसाधारणलाई सास्ती | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
२०७४ फाल्गुन ९, बुधबार , नेपाली समय : १०:३९ pm | आजको खबर, संचालक : रेनुका बराल/९८४१७१६४६५ सूचना विभाग दर्ता नं. ७४/०७३-७४, सम्पादक- डिल्लीरमण सुवेदी/९८५१२७७७२१
मुख्यसडक नै बन्द गरेर कीर्तिपुरमा चुनावी आमसभा, सर्वसाधारणलाई सास्ती
२०७४ मंगसिर १८, सोमबार ११:३२ am | आजको पत्रिका
काठमाडौँ, १८ मंसिर, अगामी बिहीबार हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रचारप्रसारको आज अन्तिम दिन । राजनीतिक दल र तीनका उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचार–प्रसारको अन्तिम कसरतमा छन् । आज मध्यराती १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने भएकोले पनि दल तथा उम्मेदवारहरु अन्तिम मौका छोप्ने तयारीमा छन् । घरदैलो र भेटघाटलाई पनि तिब्रता दिइरहेका छन् ।
मत माग्ने र प्रचार गर्ने अन्तिम दिन भएकोले काठमाडौँ क्षेत्र नं. १० अन्तर्गतको मुख्य बजार कीर्तिपुरमा आज बाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन दुबैले आमसभाको आयोजना गरेका छन् । बाम गठबन्धनले कीर्तिपुरको नगाउँ दोबाटोमा र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले कीर्तिपुरको नयाँबजारमा आमसभा राखेका छन् ।
आमसभा हुने भएपछि कीर्तिपुरको मुलसडक आज बिहानैदेखि बन्द रहेको छ । कीर्तिपुरको नयाँबजारबाट पाँगादोबाटो–नगाउँदोबाटो–चौकी–ढल्पा–समलढोका–नगरपालिका हुँदै नयाँबजार आउने रिङरोड बन्द छ । जसका कारण सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन् भने नयाँबजारबाट नगाउँ दोबाटोसम्म अन्य सवारी साधनले पनि प्रवेश पाएका छैनन् । १२ बजेबाट र्याली सुरु हुने भएकोले थप अन्य क्षेत्रको पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा असर पुग्ने देखिन्छ । जसका कारण आज दिनभर सर्वसाधारणले सो क्षेत्रमा कष्ट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ ।
कीर्तिपुर बजार क्षेत्रमा दुईवटा कार्यक्रमको आयोजना गरिएकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा असर पुगेको प्रहरी प्रभाग कीर्तिपुरले बतायो । एक अधिकारीले आजको खबरलाई फोनमा भने, 'आमसभाका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही असर पुगेको छ । रुटलाई डाइभर्सन गरी सहज बनाउने प्रयासमा छौँ ।' प्रहरी प्रभागले यस्तो बताए पनि आज दिनभर सडकको अवस्था सहज हुने देखिदैन । कीर्तिपुरमा वैकल्पिक बाटो नभएको र मुख्य सडक पनि एकतर्फी मात्रै भएकोले स्थानीयले कष्ट भोग्नु पर्नेछ । मूल सडक छेकेर आमसभा गर्न प्रहरीले नै अनुमति दिएको पनि स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । कार्यक्रम गर्ने स्थलमा प्रहरी प्रभागकै गाडी तेर्साएर बाटो अवरोध गरी समर्थन गरिरहेको स्थानीयको दाबी छ ।
'कीर्तिपुरमा आमसभा गर्नकोलागि स्थान अभाव हुँदै होइन' एक स्थानीय गोपाल श्रेष्ठले भने । नयाँबजार नजिकै रहेको खाली बसपार्कमा आमसभाको आयोजना गरेर यातायातलाई सहज बनाएको भए सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु नपर्ने उनको ठहर छ । मुख्य सडक नै बन्द हुँदा पाँगादोबाटो, नगाउँदोबाटो, ढल्पा, नगरपालिकादेखिका सर्वसाधारणले हिडेर नयाँबजार गेटसम्म आउनु पर्ने बाध्यता छ ।
जनताकालागि भन्दै राजनीति गर्ने राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिको सोचप्रति पनि सर्वसाधारणले आक्रोस पोखेका छन् । यसरी बाटै बन्द गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने नियतले कार्यक्रम गर्नु गलत भएको स्थानीय हर्षमान महर्जनले बताए । जनताकालागि राजनीति गरेको भन्दै जनतालाई नै दुःख दिने प्रवृत्ति गलत हो । यातायात बन्द नगरी र सर्वसाधारणलाई असर नपुग्ने गरी यस्ता आमसभा वा राजनीतिक गतिविधि गर्न सके राजनीतिक दल र तीनका नेताहरु सर्वसाधारणको मनमा बस्न सक्थे कि ! यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिदैन ।